सपनामा आफ्नै बिहे भएको देख्नुभयो, के फल मिल्छ ? सपनामा आफ्नै बिहे भएको देख्नुभयो, के फल मिल्छ ? – Khabaarpati
सपनामा आफ्नै बिहे भएको देख्नुभयो, के फल मिल्छ ? सपनामा आफ्नै बिहे भएको देख्नुभयो, के फल मिल्छ ?
January 5, 2021 January 5, 2021 goodmamLeaveaComment on सपनामा आफ्नै बिहे भएको देख्नुभयो, के फल मिल्छ ? सपनामा आफ्नै बिहे भएको देख्नुभयो, के फल मिल्छ ?
एजेन्सी : सपनाका विषयमा केही भ्रम र केही यथार्थ हुन्छ भन्ने मान्यतामा मानिसहरु हुन्छन्। कसैको सपनाको फल तत्काल मिल्छ भन्ने भ्रम पनि पालेका हुन्छन्। यति हुँदा पनि कस्तो सपना देख्दा के फल मिल्छ भन्ने विषय सवैलाई जानकारी नहुन सक्छ।सपना देख्नु स्वभाविक हो, कति राम्रा देखिन्छन् कति नराम्रा सबै सपना पूरा हुन्छन् भन्ने पनि छैन। अधिकांशका धेरै सपना अधुरा नै रहन्छन्। हामीले देख्ने सपना कहीँ न कहीँ बिपनासँग पनि जोडिएको हुन्छ।कति सपना निदाउँदा देखिन्छ भने कति सपनाले निदाउँनै दिँदैन। हामीले देख्ने सपनाको दैनिक जीवनमा शुभ अशुभ संकेत गर्छ भन्ने जनविश्वास छ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
ज्योतिष शास्त्रअनुसार सपनामा आफ्नै विवाह भएको देख्दा के कस्तो फल मिल्छ भन्ने बारे यहाँ चर्चा गरिएको छ। यदि कोही व्यक्ति सपनामा विवाह वा त्यससँग सम्बन्धित अन्य कुनै वस्तु देख्दछ भने त्यसको शुभ र अशुभ दुबै अर्थ हुन्छ।सपनामा आफ्नै विवाह भएको देख्नुभयो अथवा साथी, नातेदार कसैको विवाह भएको देख्नु भयो भने यस्तो सपनाको शुभ संकेत मानिदैन। यस्तो सपना देख्दा तपाईँको काममा कुनै बाधा आउनसक्ने संकेत दिन्छ।
यदि तपाईँले कोही महिलाको विवाह हुँदै गरेको देख्नुभयो भने यो तपाईँको लागि शुभ संकेत हुने विश्वास गरिन्छ। यस्तो सपना देखे तपाईँको जीवनमा छिट्टै खुशी आउनेवाला छ भनेर बुझिन्छ। तर बेहुली रुँदै गरेको देख्नुभयो भने त्यसलाई अशुभ मानिन्छ।यदि कोही केटी आफ्नो सपनामा प्रेमीले अर्कै केटीसँग विवाह गरेको देख्नुभयो भने मान्नुस त्यसको विवाह छिट्टै हुन्छ। विवाहका गहना देखे पनि छिट्टै विवाह हुने संकेत बुझिन्छ। सामान्यतया आफूले देखेको सपनाको फल विपनामा ठिक विपरित हुन्छ भन्ने मान्नेता राखिन्छ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,